Inkqubo yeHlakani ye-Bitcoin - Zuza i-Bitcoin Ngorhwebo Ngalunye | Paxful
Bhatalwa Ngokuzisa Abantu ku-Paxful
Inkqubo yethu yeHlakani ye-Bitcoin ikunceda uzise inkululeko yezemali kuluntu lwakho. Kwaye njengebhonasi, ufumana umvuzo oqhubekekayo oqinisekileyo.
Yiba liHlakani Yiba liHlakani
Umvuzo Okhawulezayo Kurhwebo Ngalunye
Wenza imali ngalo lonke ixesha usizisa abantu kwi-Paxful, naxa abantu obabamemayo, bethenga i-Bitcoin.
Zuza i- 50% Yomrhumo we-Escrow Zuza i- 50% Yomrhumo we-Escrow
Xa abantu obamemayo bethenga i-Bitcoin ku-Paxful.
Zuza i- 10% Yomrhumo we-Escrow Zuza i- 10% Yomrhumo we-Escrow
Xa abantu abamenywe ngabahlobo bakho bethenga i-Bitcoin ku-Paxful.
Kutheni Umele Ube liHlakani?
Inkqubo yethu yeHlakani ye-Bitcoin yeyona ndlela iyiyo yokuxelela abantu ngekhripto kwindawo ohlala kuyo.
Yiba ne-Bitcoin Yiba ne-Bitcoin
Wenza i-50% yomrhumo we-escrow ngalo lonke ixesha amahlakani akho ethenga i-Bitcoin.
Khulisa Inethwekhi Yakho Khulisa Inethwekhi Yakho
Wenza i-10% yomrhumo we-escrow ngalo lonke ixesha umntu othile okwinethwekhi yakho eyandisiweyo ethenga i-Bitcoin.
Khupha Imali Nanini na Khupha Imali Nanini na
Wakuzuza ubuncinane i-10 USD yexabiso le-Bitcoin, iingeniso zakho ungazikhuphela kwiwalethi yakho ka-Paxful nanini na ufuna.
Ilula kakhulu, eneneni—yiba liHlakani le-Bitcoin ngamanyathelo amathathu akhawulezayo.
Mema Nabani na Mema Nabani na
Yabelana ngekhowudi yakho yeHlakani okanye ilinki kumajelo encoko, kwiiforamu zekhripto, okanye kuluntu. Ungazifumanela ikhowudi yakho ekhethekileyo okanye ilinki phantsi kweDeshbhodi (iwebhu) okanye ithebhu (imobhayile) yeHlakani.
Benze ukuba Barhwebe Benze ukuba Barhwebe
Fundisa amahlakani akho malunga nekhripto nendlela anokurhweba ngayo ku-Paxful. Ngalo lonke ixesha bethenga i-Bitcoin, ufumana i-50% yemirhumo yabo ye-escrow. Wenza i-10% yomrhumo we-escrow ngalo lonke ixesha elinye lamahlakani abo lithenga i-Bitcoin ku-Paxful.
Khangela okwenziwa lihlakani lakho kwiDeshbhodi yeHlakani lakho uze ubone iingeniso zakho zikhula ngokuzenzekelayo. Zakufikelela ubuncinane kwi-10 USD, iingeniso zakho, imali ungayikhuphela kwiwalethi yakho ka-Paxful.
Kuvakala kusonwabisa akunjalo? Kuvakala kusonwabisa akunjalo? Masikuncede Uqalise!
Yenza iakhawunti yasimahla ku-Paxful uze uqalise ukumema abantu.
Sijoyine Namhlanje Sijoyine Namhlanje
iHlakani Imibuzo Edla Ngobuzwa
Kusenokwenzeka ukuba unemibuzo embalwa engqondweni yakho. Apha ngezantsi, siye saphendula eminye yeyona iqhelekileyo.
I-Paxful yiplatfom yomhlobo kumhlobo ekuvumela ukuba uthenge uze uthengise ikhripto usebenzisa enye yeendlela zokubhatala ezingaphezu kwe-300. Ifana ne-eBay, kodwa yemali -- ibe akukho mida kwaphela. Sinabasebenzisi abangaphezu kwe-4.8 miliyoni abasehlabathini jikelele. Lonke urhwebo oluku-Paxful lukhuselwe yisevisi ye-escrow, oko kuthetha ukuba intengiselwano ungayenza ngokukhuselekileyo usazi ukuba iimali zakho zikhuselwe.
Ndingazijonga phi iingeniso zam zehlakani?
Iingeniso zakho ungazijonga kwiideshbhodi yehlakani nakweyomthengisi.
Ndingazenza iilinki zehlakani lekhastom ukwenzela iinjongo zokulandelela?
Ewe. Kwideshbhodi yeHlakani, unokwenza iilinki efana yodwa elandelelwayo phantsi kwecandelo loKhangelo lwe-ID, ukuze wabelane nabantu obadlulisele kwikhriptokharensi.
Ukuqinisekisa ukuba sonke siziqonda ngendlela efanayo izinto ezivumelekileyo nezingavumelekanga, sidwelise apha ngezantsi ezinye zezinto onokuziphepha njengeHlakani.
Ukwenza iiakhawunti eziliqela - kuvumeleke enye kuphela ku-Paxful.
Ukusebenzisa ukwalathisela (ukudlulisela) okusuka kwiwebhsaythi yakho ukuya kwiwebhsaythi ka-Paxful.
Ukuzibandakanya kwizenzo zobuqhetseba ukuze uzuze amahlakani.
Ukuthenga intengiso yemibuzo enophawu, olunjengolu: Paxful, paxful.com, okanye olunye olusuka kula - kuquka nohlobo olungapelwanga kakuhle.
Ukusebenzisa imibuzo enophawu lwezinye iinkampani ezikhuphisanayo ngelokwenza intengiso yebhrendi yakwa-Paxful - kwanokuthelekisa u-Paxful nezinye iibhrendi, ubonisa ukuzinyathelela phantsi.
Ukupapasha inkcazelo yobuxoki ukuze utsale abathengi abangakumbi, okanye ukulahlekisa abathengi nangeyiphi na enye indlela.
Ukubiza umrhumo phezu kweengeniso zakho zeHlakani eziku-Paxful.
Ufuna ukwazi ngakumbi? Jonga Imimiselo Yesevisi yethuYenkqubo Yehlakani.
Yintoni iNkqubo yeHlakani lakwa-Paxful, kwaye isebenza njani?
INkqubo yeHlakani yakwa-Paxful lithuba elimnandi lokuba uvuzwe ngokwabelana ngo-Paxful kunye nomntu wonke omaziyo. Eneneni kulula—uza nabantu ku-Paxful, uze ufumane isabelo semirhumo yabo ye-escrow ngalo lonke ixesha bethenga ikhripto ku-Paxful. Uzokwenza i-50% yomrhumo we-escrow* ngabantu oza nabo ku-Paxful, kunye ne-10% yomrhumo we-escrow * ngabantu ababazisa ku-Paxful. Ibe oku akwenzeki kanye nje, kodwa ngalo lonke ixesha bethenga ikhripto ku-Paxful. Unokwakha inethiwekhi yakho yokudlulisela ikhriptokharensi ngokulula xa ufaka ilinki yakho yehlakani lakwa-Paxful kwikhontenti oyiyilayo, yabelana ngayo kumajelo okuncokola, okanye uyibhengeze kwiwebhusayithi yakho.
Buthini ubume bekhomishini kwinqanaba ngalinye lale nkqubo?
Ufumana intlawulo ngalo lonke ixesha elinye lamahlakani akho, okanye abo bangamahlakani abo belugqiba ngempumelelo urhwebo ku-Paxful. Imali oyifumanayo ibalwa ngokusekelwe kumrhumo wethu we-escrow oqhelekileyo, oyi-1% yemali erhwetyiweyo, ngaphandle kokuba umrhumo we-escrow ungaphantsi kwe-1%. Ukuba umrhumo we-escrow ungaphantsi kwe-1%, umrhumo wehlakani ubalwa ngokusekelwe kuwo nawuphi umrhumo we-escrow welo xesha. Ukuma kwentlawulo kulandelela ngolu hlobo: Inqanaba 1: Ufumana i-50% yomrhumo we-escrow oqhelekileyo xa umsebenzisi ethenga ikhripto ngempumelelo. Inqanaba 2: Ufumana i-10% yomrhumo wethu we-escrow oqhelekileyo xa umsebenzisi ethenga ikhripto ngempumelelo.
Yiyiphi imithombo yekhontenti neyokubhengeza eyeyona ndlela ingcono yokutsala abantu kwilinki yam yehlakani?
Kukho imithombo emininzi eyahlukeneyo enokukusebenzela, kuquka iblog yakho, iwebhsaythi yakho, i-Google AdWords, i-Yandex Direct, iintengiso ze-Yahoo/i-Bing, iinethiwekhi zentengiso zemobhayile, i-YouTube kunye nezinye iiplatfom eziphambili zokuzonwabisa nezemali. Amajelo encoko nawo asisixhobo esihle sokukunceda ufumane i-Bitcoin ngokudlulisela abantu. Licebo elihle ukusebenzisa ukhangelo lwee-ID kuzo zonke izibhengezo ozenzayo, ukuze ubone ukuba yeyiphi eyona ikusebenzelayo uze ufunde kuyo.
Zihlaziywa kangaphi iinkcukacha-manani kwiDeshbhodi yeHlakani?
Iinkcukacha-manani ahlaziywa phantse ngexesha ezenzeka ngalo izinto kwiDeshbhodi yeHlakani. Ngoko nantoni na oyibonayo kwideshibhodi ichaza indlela izinto ezime ngayo ngalo mzuzu.
Kutheni amanye amahlakani am esenza urhwebo oluninzi, ngoxa amanye ebhalise nje ngaphandle kokwenza kwa urhwebo olunye?
Abantu baneemfuno ezahlukeneyo. Abanye bangafuna nje ukuthenga i-Bitcoin yabo yokuqala ku-Paxful baze bayibambe kangangeenyanga okanye iminyaka, ngoxa abanye bengaqhubeka besebenzisa iplatfom ukuthenga okanye ukuthengisa ngakumbi. Izinga lokusebenza lamahlakani akho linokuxhomekeka nakwikhontenti oyiyilayo ukuze ubadlulisele nokuba ngoobani ojolise kubo.
Ndiye ndibhatalwe nini?
Iingeniso zakho ozifumana ngokudlulisela abantu kwikhriptokharensi ziye zifakwe kwiwalethi yakho yeHlakani ngokukhawuleza emva kokuba ihlakani lakho ligqibe urhwebo. Xa sowuqokelele i-10 USD yexabiso leengeniso zehlakani le-Bitcoin, ungazisa kwiwalethi yakho yakwa-Paxful nanini na ufuna. Wakuzuza i-300 USD yexabiso lee-Bitcoin, siza kucela wenze uqinisekiso lwesazisi nolwedilesi. Icebiso Lengcaphephe: Iingeniso zakho ze-Bitcoin ungazithengisa kwiplatfom yethu ukuze ufumane ingeniso eyongezelelekileyo!
Ndingayifumana phi ilinki yam yehlakani?
Ilinki yakho yehlakani ungayifumana kwiideshbhodi yehlakani nakweyomthengisi.
Ndingalujonga phi ukhangelo lwee-ID lwekhastom lwam?
Kungekudala, uza kukwazi ukujonga ukhangelo lwee-ID kanye kwideshibhodi yakho. Hlala ukhona!
Ngawaphi amazwe endinokuya kuwo xa ndikhangela abantu endinobadlulisela?
U-Paxful usehlabathini jikelele kwaye unokusetyenziswa naphi na ngofikelelo lwe-intanethi. Ngoko ukuba ngabaphi abantu obafunayo kuxhomekeke kuwe—ekuhlaleni, kwiingingqi, kuzwelonke okanye ezinye iindawo. Okwangoku, uninzi lwabasebenzisi bethu ngabase-U.S., ngoxa iAfrika, iAsia, neLatin America izezona ndawo zethu zentengiso zikhula ngokukhawuleza.
Mangaphi amanqanaba akwiNkqubo yeHlakani lakwa-Paxful, yaye asebenza njani?
Ukuzuza i-Bitcoin akulinganiselwanga ngokudlulisela abantu babe ngamahlakani akho ngokuthe ngqo kuphela. Kunoko, kukho amanqanaba amabini kwiNkqubo yeHlakani yakwa-Paxful -- enye ngokuthe ngqo kunye nenye ngokungathanga ngqo: Inqanaba 1: La ngamahlakani abhalise ngqo kwilinki yakho. Inqanaba 2: La ngamahlakani abhaliswe kwilinki yelinye lamahlakani akho athe ngqo.
Ukuba ihlakani lam lirhweba nelinye ihlakani, ngaba ndisafumana ikhomishini epheleleyo?
Ukuba amahlakani akho ngokuthe nqqo amabini arhweba kunye, uza kufumana i-25% yemivuzo iyonke kolo rhwebo endaweni ye-50% ngokuqhelekileyo.
Umntu endiye ndamcebisa ajoyine u-Paxful, ubhalise engasebenzisanga ilinki yam. Ngaba ndisengayifumana ikhomishini?
Ngelishwa, hayi. Umvuzo wehlakani ubakho kuphela kubasebenzisi ababhalisa ngokusebenzisa ilinkiyakho yehlakani efana yodwa.
Ndinejelo lonxibelelwano lwencoko enxulumene ne-bitcoin, kwaye abalandeli bam banomdla wokuthenga okanye wokuthengisa i-bitcoin. Ngaba ndinokubathumela ku-Paxful njengendlela efanelekileyo yokwenza njalo?
Ngokuqinisekileyo! U-Paxful yenye yeendlela ezilula emhlabeni kuye nabani na, naphi na ukuba athenge okanye athengise i-Bitcoin. Abantu bakho obadlulisele kwikhriptokharensi bangabhalisa besebenzisa ilinki yehlakani baze baqalise ukuthenga okanye ukuthengisa i-Bitcoin ngemizuzu! Ngalo lonke ixesha bethenga ku-Paxful, ufumana umvuzo wehlakani.